Mabasa 27 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mabasa Evaapostora 27:1-44
Pauro anoenda kuRoma nengarava (1-12)
Dutu rinorova ngarava (13-38)
Tsaona yengarava (39-44)
27 Pazvakasarudzwa kuti tiende kuItari nechikepe,+ vakaisa Pauro nevamwe vasungwa mumaoko emukuru weuto ainzi Juriyasi, wechikwata chaAgasto. 2 Takakwira ngarava yaibva kuAdramitiyumu ichienda kuzviteshi zvakatevedza mhenderekedzo yenharaunda yeEzhiya, ngarava ikatanga kufamba; mumwe aiva nesu ndiAristako+ muMakedhoniya aibva kuTesaronika. 3 Mangwana acho takasvika kuSidhoni, uye Juriyasi akabata Pauro zvakanaka,* akamubvumira kuenda kushamwari dzake kuti dzinomubatsira. 4 Takabva ipapo tikapinda mugungwa, tikaenda takadzivirirwa neSaipurasi, nekuti mhepo yaibva kwatakanga takatarisa. 5 Takabva tafamba nemugungwa takatevedza Kirikiya nePamfiriya tikasvika pachiteshi chezvikepe chepaMaira muRikiya. 6 Ikoko mukuru weuto akawana ngarava yaibva kuArekizandriya ichienda kuItari, akaita kuti tikwire iyoyo. 7 Takafamba zvishoma nezvishoma kwemazuva, ndokuzosvika kuKinidho tatambura. Sezvo mhepo yakatitadzisa kuramba tichienda mberi, takafamba takadzivirirwa neKrete tichipfuura nepaSarimoni. 8 Uye takafamba tichiita zvekutamburira tichitevedza mahombekombe ndokusvika panzvimbo yainzi Pekuzororera Pakanaka, yaiva pedyo neguta reRaseya. 9 Nguva yakareba yakanga yapfuura uye iye zvino zvakanga zvava nengozi kuti tifambe nemugungwa, nekuti kunyange kutsanya kwepaZuva Rekuyananisira+ kwakanga kwatopfuura, saka Pauro akataura 10 navo achiti: “Varume, zvandiri kuona ndezvekuti rwendo urwu ruchaguma nekuparara nekurasikirwa kukuru nezvinhu zvakatakurwa nengarava, pamwe nengarava yacho. Isuwo vacho tinogona kurasikirwa neupenyu hwedu.”* 11 Asi mukuru weuto akateerera mufambisi wengarava nemuridzi wayo panzvimbo pezvaitaurwa naPauro. 12 Sezvo chiteshi chengarava chakanga chisingaiti kuti vapedze mwaka wechando vari ipapo, vakawanda vakati tibve ipapo kuitira kuti kana zvichiita vapedze mwaka wechando vari kuFonikisi, chiteshi chengarava cheKrete chinopindwa nekuchamhembe kwakatarisa kumabvazuva uye nekumaodzanyemba kwakatarisa kumabvazuva. 13 Pakavhuvhuta mhepo yekumaodzanyemba zvinyoronyoro, vakafunga kuti vakanga vabudirira pachinangwa chavo, saka vakasimudza zvinomisa ngarava ndokutanga kufamba vachitevedza Krete vari pedyo nemahombekombe. 14 Asi pashure pekanguva, kwakauya mhepo yakasimba, yainzi Yuroakwiro* ikarova ngarava. 15 Ngarava payakarohwa nemhepo zvine simba, isisakwanisi kuramba yakatarisa kuri kubva mhepo, takazongotevedzera kwayaida kuenda ndokutanga kuendwa nesu. 16 Takabva tafamba takadzivirirwa nekamwe kachitsuwa kanonzi Kaudha, asi taiomerwa nekudzikamisa kachikepe* kakanga kakatakurwa kumashure kwengarava. 17 Asi pashure pekukakwidza mukati, vakatanga kushandisa tambo dzacho kusunga ngarava nepadumbu payo, uye vachitya kurovera pajecha kuSitisi,* vakaita kuti zvinobata mhepo kuti ngarava ifambe zvidzike, vakabva vatanga kungoendwa navo. 18 Sezvo taisundwa zvakasimba nedutu, mangwana acho vakatanga kuita kuti ngarava irerukirwe. 19 Uye pazuva rechitatu, vakarasira kunze nemaoko avo zvavaishandisa kufambisa ngarava. 20 Patakaona mazuva akawanda apfuura tisina kuona zuva kana nyeredzi, dutu rine simba richingotirova, tariro yedu yekupona yakatanga kupera. 21 Pashure penguva yakareba tisingadyi, Pauro akasimuka pakati pavo, akati: “Varume, dai makateerera zvandakataura kuti musapinda mugungwa kubva kuKrete mungadai musina kuparadza zvinhu uye kurasikirwa zvakadai.+ 22 Kunyange zvakadaro, ndinokukurudzirai kuti mushinge, nekuti hapana kana mumwe wenyu achaparara, kunze kwengarava chete. 23 Usiku huno ngirozi+ yaMwari wangu wandinoitira basa dzvene yamira pedyo neni, 24 ikati, ‘Pauro, usatya. Unofanira kumira pamberi paKesari,+ uye Mwari achakuponesera vese vauri kufamba navo mungarava.’ 25 Saka farai varume, nekuti ndinotenda muna Mwari kuti zvichaitika sezvandaudzwa chaizvo. 26 Asi tinofanira kurasirwa panyika pane chimwe chitsuwa.”+ 27 Pahwakanga hwava usiku hwechi14 tichingokandwa kwese kwese muGungwa reAdriya, pakati peusiku vafambisi vengarava vakatanga kufungidzira kuti vakanga vava kuswedera pedyo neimwe nyika. 28 Vakayera kudzika kwacho vakaona kuti paiva nemafatomu 20,* saka vakati fambei ndokuyera zvakare vakaona kuti paiva nemafatomu 15.* 29 Vachitya kuti taigona kurovera pamatombo, vakakanda zvinotsigisa ngarava zvina vari shure, uye vakatanga kungoti dai kwachiedza. 30 Asi vafambisi vengarava pavakanga vava kuda kutiza vachisiya ngarava vachinyepedzera kunge vari kudzikisa zvinotsigisa ngarava asi ivo vachidzikisa kachikepe vari nechekumberi kwengarava, 31 Pauro akati kumukuru weuto nekuvarwi: “Kana varume ava vakasaramba vari mungarava, hamusi kuzoponeswa.”+ 32 Varwi vakabva vacheka tambo dzakanga dzakabata kachikepe vakakarega kachidonha. 33 Pakwakanga kwava kuedza, Pauro akavakurudzira vese kuti vadye achiti: “Nhasi rava zuva rechi14 musingazivi zvichaitika, musina kana chamuri kudya. 34 Saka ndinokukurudzirai kuti mudye; izvi zvichakubatsirai kuti mupone, nekuti hapana kana mumwe wenyu acharasikirwa nebvudzi remumusoro make.” 35 Pashure pekutaura izvi, akatora chingwa, akatenda Mwari pamberi pavo vese, akachimedura, ndokutanga kudya. 36 Saka vese vakanzwa vasimbiswa, vakatanga kudya. 37 Tese takanga tiri 276 mungarava macho. 38 Pavakanga vadya vakaguta, vakarerutsira ngarava nekukanda gorosi mugungwa.+ 39 Pakwakachena, vakatadza kuziva nyika yacho,+ asi vakaona mamwe mahombekombe aiva nejecha, saka vaida kuti kana zvichiita vanomisa ngarava ipapo. 40 Saka vakacheka zvinotsigisa ngarava, vakazvirega zvichiwira mugungwa, uku vachisunungura tambo dzezvikwasviso zvepachidzoreso; pashure pekusimudza zvinobata mhepo zvekumberi, vakananga kumahombekombe acho ane jecha. 41 Vakarovera pajecha rakanga rakaungana mumvura, ngarava ikatungira mujecha nemuromo wayo zvekutadza kubvapo, ikabva yatanga kutyorwa-tyorwa nechekumashure nemasaisai ane simba.+ 42 Varwi vakabva vafunga zvekuuraya vasungwa, kuti parege kuva nevanoshambira, vakatiza. 43 Asi mukuru weuto aiva nechido chekusvitsa Pauro zvakanaka, saka akavarambidza kuita zvavakanga varonga. Akati vaya vaikwanisa kushambira vasvetukire mugungwa, vatange kusvika pachitsuwa, 44 uye vamwe vese vaifanira kutevera, vamwe vari pamapuranga, vamwe pazvimedu zvakanga zvabva pangarava. Saka vese vakasvika pachitsuwa zvakanaka.+
^ Kana kuti “akaratidza Pauro mutsa.”
^ Kana kuti “nemweya yedu.”
^ Kureva, mhepo yekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva.
^ Aka kachikepe kekuwedzera kaifambwa nako kaigona kushandiswa pakununura vanhu kana ngarava yapinda munjodzi.
^ Angasvika mamita 36. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
^ Angasvika mamita 27. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.